Inde: Maty nisy namono ilay mafana fon’ny RTI · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Aogositra 2010 7:08 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 繁體中文, 简体中文, English
Tamin'ny faha-20n'ity volana ity , maty novonoin'ny lehilahy roa mitam-basy tsy fanta-piaviana manohitra ny Fitsarana Avo Gujarat any Ahmedabad , any Inde, i Amit Jethwa ilay manampahaizana manokana momba ny tontolo iainana sady mpanao fihetsiketsehana miaro ny Zo hahazo vaovao (RTI) . Niseho andro vitsy taorian'ny fanadihadiany mikasika ny ady amin'ny tombontsoam-bahoaka tao amin'ny Fitsarana Avo Gujarat izay nanondroany mpikambana iray avy amin'ny antoko Bharatiya Janata mpikambana ao amin'ny parlemanta, i Dinu Solanki iray amin'ireo antoko voakasika amin'ireo hetsika amin'ny fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany tsy ara-dalàna ao amin'ny faritra arovana Gir Forest (fonenan'ny farany amin’ireo liona aziatika ) any Junagadh, Gujarat, ity famonoana azy ity.
Any amin'ny firenena izay nahitana olona valo maty nisy namono sy fanafihana lehibe 20 natao tamin'ireo mafàna fon'ny RTI tamin'iny taona farany iny hatramin'izao, ny famonoana indray an'i Jethwa dia nitondra an-trano ireo loza amin'ny fitsanganana hanohitra ny kolikoly avo lenta/mahery vaika.
Nanao hetsika matanjaka noho ity loza nitranga ity ireo mponina amin'ny aterineto . Nisy ireo fanambaràna amin'ny teny mahery napetraky ny olona manameloka ny famonoana ho faty. Mitobaka ireo tweets/bitsibitsika ao amin'ny Twitter maneho ny fihetseham-pon'ireo mponina amin'ny aterineto, ireto ambany ireto ireo sasany nalaina tamin'izany :
bittusahgal: Ny namako Amit Jethwa, izay nanokana ny fiainany hiarovana ny fiainana anaty alan'i Gujarat dia nalatsak'aina 20 minitra lasa izay. Lasa adala izao tontolo izao .
ranjona: @bittusahgal tena manohina mihitsy izany . Niasa mafy i amit ary nandà ny hiala amin'izany izy.
s_chowdhury: Misaona ny fahafatesan'i Amit Jethwa aho , maty voatifitra teo anoloan'ny Guj HC izy. Mpiady irery amin'ireo mafia izay manao ny fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany izy ary niezaka niaro ireo Gir lions
drrbalu :Mafàna fon'ny RTI iray hafa indray, Amit Jethwa no maty nisy namono . Nahita làlana hampanginana mandrakizay ireo mafàna fon'ny RTI ireo ry ireo mpanao politika sy ireo mpitarika mpanao kolikoly
KanishkaNarayan: Tohina sady matahotra noho ny famonoana an'i Amit Jethwa noho ny fanadihadiany ny PIL manohitra ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany tsy ara-dalàna aho
Vinaymenon01: Tena mampalahelo ny famonoana ho faty indray ny mafàna fon'ny rti. Fanomezana lehibe nomen'ny pm antsika izany. Mijery ny tsy mety ary avy eo maty misy mamono raha miezaka manarina izany.
protectwildlife: Manafintohina; maty voatifitra i Amit Jethwa, namana mpikambana ao amin'ny fitahirizana ny rakitry ny ela sy mafàna fo ao amin'ny nathistory Indiana . Filohan'ny klioban'ny Gir Youth Nature izy
_bharath_k : mafàna fon'ny RTI iray hafa indray no maty nisy namono . Ny hafatra -” mangataka ny fandraisan'andraikitra avy amin'ireo mpiasa birao sy ireo mpanao politika ! Fantatray hoe aiza ianareo no mipetraka .”
nutanthakurlko: Hanao ny zavatra rehetra mety ho vitanay izahay hahitàna ny marina amin'ny tranga-na vonoolona mikasika an'i Sri Amit Jethwa, ilay mafàna fon'ny RTI sady mpiara-miasa aminay any Gujarat.
TusharG: Satyendra Dube, Manjunath Shanmugham, Yogendra Pande, Satish Shetty, Navleen Kumar, Amit Jethwa……. Maritioran'ny Inde vaovao .
Nanoratra i Madhusudan Katti eo amin'ny blaoginyReconciliation Ecology:
Vaovao mampalahelo mihoson-drà avy amin'ny vava-ady ho fitahirizana ny rakitry ny ela any Gujarat, Inde: maty nisy namono teo anatrehan'ny Fitsarana Avo Gujarat any Ahmedabadi i Amit Jethwa, tanora mafàna fo amin'ny fiainana anaty ala izay fantatro tamin'ny alalan’ireo lahatsorany tsindraindray mikasika ny Nathistory-India! Teo amin'io toerana io izy mba hanohitra ny mafia amin'ny fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany izay mampitahotra ny fonenana ara-boajanahary farany ho an'ireo Liona Aziatika ao amin'ny valan-java-boahary nasionaly Gir , izay namoizan'i Amit ny fiainany mbola tanora ho amin’ – izany, ara-bakiteny mihitsy ! Mijanona ho raharaha mampiahiahy ny fitahirizana ny fiainana anaty ala any Inde (na any rehetra any aza ) – angamba amin'izao fotoana izao indrindra indrindra , ary miala satroka (ny mpitahiry ny rakitry ny ela akademika ) aho ho an'ny olona toan'i Amit izay nanaiky ireo ady sarotra niseho na dia nisy aza ireo loza nandindona
Nanoratra ity manaraka ity ilay olon-tsotra mpanao gazety Subhash Chandra, tao amin'ny lahatsoratra tao anatin'ny Merinews, :
Ilaina ireo dingana lehibe haingana sy faratampony indrindra mba hisorohana ireo zava-mitranga toy izao ary hahazoana antoka fa miaro ny olona toa azy, izay miady amin'ny manankarena sy ny matanjaka, ny lalàna sy ireo manam-pahefana …Sangisangy ihany ny hoe niditra tao amin'ny rafitra ara-politikantsika ireo mpamono olona sy ireo mpanao kolikoly, ary hahazo fiarovana, raha toa kosa ka hahazo fandrahonana mandritry ny androm-piainana , avy amin'ireo mpanao politika malaza na avy amin'ireo eo ambany fiahian'ireo mpanao politika ireo, ireo mpaneho ny marina .
Natao ny fanangonan-tsonia amin'ny aterineto halefa ho an'ny Praiministra, sy ireo Lehibe any amin'ny Ministera manerana ny fanjakana Indiana, hisarihana ny sain'izy ireo ho amin'ireo loza mitatao mahazo ny hafanam-pon'ny RTI eo amin'ny firenena, satria niditra an-daharana hanosika ny hahitana ny marina mikasika ireo mpiray asa aminy ireo mafana fo. Naneho ireto ny fanangonan-tsonia :
Manome alalana ireo mponina hampiasa ny vaovao ho fitaovam-piadiana ny fanjakana, amin'ny fankatoavana ny RTI Act. Nefa tsy dia ahoana izany raha nitondra ireo meloka ho gadraina na nanome fiarovana ireo mpaneho ny marina , mitsoaka ny adidiny amin'ny marina, izany hoe ny andraikitry ny governemanta amin'ny fiarovana ireo mpaneho ny marina .
Antenaina fa hihaino izany ny fahefana misy ary isika vahoaka kosa ho vonona ny hanohana mavitrika ireo ‘mpiady irery’ – araky ny ambaran'ity tweet/bitsika manondro mivantana ity
TusharG: @SinghGirishR Amin'ny manaraka , Amit Jethwa hafa indray no hiady ireo adintsika ary hitsangana hifampitantana miaraka aminy irery ary amin'izay dia hisy ny fiovana .
22 ora izayNepal